राति सुतेको बेला पनि हैरान गर्नेले दनक नखाए के खाने ?: मन्त्री बास्कोटा::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
राति सुतेको बेला पनि हैरान गर्नेले दनक नखाए के खाने ?: मन्त्री बास्कोटा
विधेक पारित नभए डिजिटल कारोबारले बैधता नपाउने समेत उनले बताए । विद्युतीय कारोबार ऐनभन्दा सूचना प्रविधि विधेयक धेरै लचक भएको भएपनि त्यस्तो कुराहरुले कसैले नहेर्ने गरेको आ`रोप लगाए ।
विधेयकमा दण्ड जरिवाना बढी भएपनि त्यसलाई अझै मिलाउन सकिने अवस्था भएको उल्लेख गर्दै बास्कोटाले भने, ‘एउटा स्याल चल्ला टिप्ने हुन्छ । उसले चिल आयो चिल आयो भनेर कराउँछ ।
त्यसपछि मान्छे आकाशतिर हेर्छ । स्यालले चल्ला टिप्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेर कराउने तर डिजिटल क्षेत्रमा पारदर्शीता र सुशासन आएको नहेर्ने ?’
बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई निरन्तर गलत नियत राखेर जिस्क्याउनेलाई कारवाही हुने भन्ने शब्दको अन्य अर्थ लगाएर व्याख्या भइरहेको बताए । हल्ला गर्नेहरुले निजी क्षेत्रको अराजकतावादलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै बास्कोटाले भने, ‘जिस्काए वाफत सजाय हुने भन्ने कुरामा यत्रो हैरानी ?
हैरानी गर्न पाइन्छ । कस्तो कल्चर हो यो ? कसलाई हैरानी गर्ने आफ्नालाई हैरानी गरे त ठिकै छ । अंगालो मारेपनि राम्रै हो । अर्कासित हैरानी गर्ने । राति सुतेको बेला पनि हैरानी गराउन थालियो भने दनक नखाए के खाने ?’